Ifilimu yokuqala epeyintiweyo yeoyile inika ubomi kuVan Gogh | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La Ifilimu yokuqala yeoyile unika ubomi Van Gogh kwifilimu ebonakalayo Ukubhinca ngobuchule bobugcisa apho ndibulela umsebenzi weqela we amagcisa angaphezu kwekhulu ukwazile ukunika ubomi kule filimu usebenzisa ubuchule bokubonisa ioyile, ukufezekisa Isiphumo esimangalisayo somzobo Ukutsalela ingqalelo nakwabo bangakhange balandele umsebenzi wegcisa elikhulu.
Un umsebenzi oyingqayizivele kunye onomdla que isisa kubomi begcisa ngendlela engazange yabonwa ngaphambili ngesitayile esitsha seemovie, esibonisa ubume obumsulwa balo mzobi. Xa sibona imovie yakho asizukubukela imovie elula kodwa sizakube sibona iziphumo zayo into entsha kumzi mveliso wefilimu, Ukusetyenziswa kweoyile njengecebo lokuzoba isakhelo ngasinye sefilimu yakhe.
Ukuthanda uVincent yiyo Ifilimu yokuqala kwishishini lefilimu ekusebenziseni ubuchule beoyile obukwaziyo ukuvusa umzobi uVan Gogh ngendlela engazange yabonwa ngaphambili Ukuqaqambisa icandelo lobugcisa Njengamandla amakhulu.
Itotali 65.000 izakhelo kunye Intsebenziswano yamagcisa ali-100 ukupeyinta isakhelo ngasinye kwezi zisa obu buchule ebomini yeoyile eshukumayo.
Kule vidiyo sinokubona imbonakalo encinci ebonisa indawo ebonakalayo yale Iprojekthi yefilimu.
Imuvi ubalisa ngobomi bomzobi usebenzisa iileta ezingama-800 eye yanikezela ukuphuhlisa isicatshulwa sefilimu, kwelinye icala amagcisa athabatha inxaxheba kwinxalenye yemifanekiso bhanyabhanya egxile kuyo phinda ngaphezulu kwesakhelo esingaphezulu kwe-100 wegcisa njengezicwangciso eziphambili zokuzisa umsebenzi womzobi odumileyo ebomini ngokuhamba.
Ekuqaleni bekucingelwa ukwenza ifilimu emfutshane apho Mnye kuphela umculi oza kuthatha inxaxheba kuphuhliso lwayo kodwa ngokwamazwi akhe kungathatha malunga neminyaka engama-21 ukugqiba Le projekthi iyodwa, ngenxa yesi sizathu le ngcamango yashiywa kwaye umsebenzi waqala kwifilimu kunye intsebenziswano yamanye amagcisa kunye nemveliso ye BreakThru Iifilimu.
Nokuba ungumculi okanye akunjalo Awungekhe uyiphose le nto imangalisayo ifilimu ebonisa isiphumo esingahlambulukiyo somzobo kwaye sahluke kakhulu kwinto esiqhele ukubona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ifilimu yokuqala epeyintiweyo yeoyile izisa uVan Gogh ebomini
UCarlos Javier Arce Dolz sitsho
U-Yasmina Samudio, ndicinga ukuba sele ndikubonise i-trailer, kodwa ndiyayifumana le AWESOMEEEEEEE ...
Phendula uCarlos Javier Arce Dolz
Yasmina samudio sitsho
Ngokwenene sathetha ngaye! Hahaha besele ndiyibonile inqwelwana ekuqaleni konyaka hahahahaha inkulu kakhulu!
Phendula Yasmina Samudio
IFiorucci Fiorucci sitsho
Ndithatha nje esi sihloko, enkosi kakhulu
Phendula Fiorucci Fiorucci